I-Kanbanflow - isicelo esihle sokulawula imisebenzi elindileyo - ii-Geofumadas
NgoJuni, 2019 ezintsha, Internet kunye neBlogs
I-Kanbanflow, ithuluzi lokuvelisa, elingasetyenziselwa kwisiphequluli okanye kumadivayisi eselula, isetyenziswe ngokubanzi kwiintsebenziswano ezikude, oko kukuthi, uhlobo lokuzimela; kunye nemibutho okanye amaqela osebenzayo unokubona inkqubela phambili yemisebenzi yamalungu ayo onke. Ukuba ungomnye walabo abanemisebenzi emininzi kwaye bengayazi indlela yokuququzelela, okanye unabasebenzi abaninzi kwaye abazi ukuba uyayijonga njani inkqubela yakho, iKhanflowflow ikuwe.
Kule nqaku, siza kubonisa ukusetyenziswa kwesi sixhobo ngokupheleleyo, ngokusebenzisa umzekelo; kungekho ngaphandle kokubonisa kuqala umbono ophezulu okanye ideshibhodi. Ujongano lwe web kakhulu ilula, ukuba ukungena ungabona koyintloko bar equlathe: iqhosha lemenyu - boards- (1), izaziso (2), uqwalaselo (3), inkxaso (4) kunye neprofayili yomntu eyombutho (5).
Ngokufanayo, kukho iibhloko ezimbini kwiimbono eziphambili, ibhodi enye-apho zonke iibhodi ezidalwe zikhona, impahla yelungu eliye langena kwiplatifti, kunye nalawo adalwe ngabaphathi basondeza.
Kwiphepha lesibini - amalungu - kukho uluhlu lwawo onke amalungu eqela elisebenzayo kunye ne-imeyile yabo yokunxibelelana.
Ukubonisa umgangatho osebenza bhetele, umzekelo uya kwenziwa kweso sabelo sangempela.
1. Yakha ibhodi: unokwenza amabhodi amaninzi njengoko ufuna, kule miba yonke imisebenzi iya kulawulwa kwaye ibekwe. Ukwenza ibhodi, kukho iindlela ezimbini, enye ngombono ophambili lwesixhobo, apho ucofa kwiqhosha ukudala ibhodi - bakholelwa kwibhodi (1) kwaye okwesibini kusetyenziswa iqhosha lokuqwalasela (2); kukho imbono yombutho, kunye nemali yeebhodi kunye neqhosha ukwenza ibhodi.
2. Unako ukudala ibhodi ngokukhetha enye yezi ndlela zilandelayo: Wena kanban ibhodi nale ibhodi idaliwe kunye kwiikholamu yokhetho lwakho, okwesibini ukhetho kukuba ukukopa ibhodi wadala ngaphambili (kunye isakhiwo esifanayo), kwaye elesithathu kukudala ideshibhodi ebonisa ulwazi lweebhodi ezininzi apho intlangano inayo.
3. Iqala ngolu hlobo lokuqala, apho igama lebhodi liboniswa (1), kwaye likhethwa ukuba ibhodi ibingumbutho, okanye isebenzise ngokuzimeleyo (2). Inkqubo ilandelwayo (3), kwaye iwindi yekholomu ivuliwe, inkqubo ivula iikholomu ze-4 ngokuzenzekelayo (4), nganye ibonisa inqanaba lomsebenzi ngamnye. Amagama anokuguqulwa kwaye ayahlengahlengiswa ngokuxhomekeka kwiimpawu zentsholongwane kunye neemfuno zeqela lomsebenzi, ukongeza okanye ukuphelisa iikholomu (5), inkqubo ilandelwa (i-6).
4. Ingongoma elandelayo kukuchaza ukuba yeyiphi na iikholomu imisebenzi eqhotyoshelweyo iya kufakwa (1), ukuba isixhobo sakha ikholamu entsha, okanye ukuba kwibhodi yangoku akudingekile ukuba icacise (2). Isinyathelo sokugqibela kukubonisa, zingaphi imisebenzi enokubanjelwa kuyo nganye ikholomu - i-WIP (4), inkqubo igqityiwe (5).
5. Ekupheleni yeBhodi waphawula ukuba ukongeza imisebenzi, u nqakraza kwi emnqamlezweni eluhlaza ecaleni kwegama kwikholam nganye (1), i window kunye iinkcukacha zomsebenzi, igama ivula - umhlathi apho okokuba uhlala phi na (iimbono ) (2), umbala oluthandayo window, amalungu enze umsebenzi ezinxulumene ukuya iithegi uphendlo engcono (3), inkcazo assignment (4) ezinxulumene izimvo (5). Icala lasekunene window, uthotho izixhobo ukwenza ezinye iinkcukacha kwi-msebenzi (6).
Ukusetyenziswa kwemibala kwizabelo kunokubaluleka kubaninzi, kuba oku kunokwenzeka ukuhlukanisa iinkqubo ezahlukeneyo okanye ezilinganayo, ukwenzela ukuba ukwazi ukubona ngempumelelo inkqubela yomsebenzi ngamnye ngokukhawuleza.
Iimbono, enye ingongoma eyenza esi sixhobo sikhulu, kuba umnini webhodi, okanye umphathi wesenzo angabonisa iinkcukacha ngokubhekiselele kumsebenzi, enye indlela ephathelele ilungu elenza le nkqubo ngokwayo.
6. Izixhobo ezikunceda ukuphatha kakuhle umsebenzi, zilandelayo: Hlanganisa (1): unokongeza iinkcazelo, amalungu, amaleyibhile, ii-subtasks, umhla wokugqibela, ixesha eliqikelelweyo lexesha, ixesha lokubhala, izimvo,
Hambisa (2): uye kwenye ibhodi okanye enye ikholomu. Isikhathi (3): Qala i-Countdown (counter), oku kuyingqayizivele edibanisa indlela ye-pomodoro, equka ukuseka ixesha elide eliphakathi kwe25 kunye nemizuzu ye-50; liyakulungelelaniswa ngokupheleleyo ngokufikelela ekuqwalaselweni kwayo xa sele iqalile. Iingxelo (4): iingxelo zemiba. Okunye (5): Yenza i-URL ehambelana nomsebenzi. Susa (6): cima
Iingxelo unganikeza ingcamango uye waba yintoni inkqubela yomsebenzi, ngoko ke umntu owenza loo nto. Kube lula ngokwayo, umphathi ayikho ukuqhuba ingxelo lwangaphandle eqongeni, yintoni yinkcitha xesha uza kuqwalaselwa. Ngokufanayo, ubuchule pomodoro ivumela umsebenzi kwimizuzu 50, angabanika kumabi namaxesha okuphumla msebenzi imizuzu 5, ezi ezincinane yokuphumla kuthiwa pomodoros, emva kokuba umntu oqokelela 4 pomodoros, abanye Ilandelayo iya kuba nemizuzu ye-15.
7. Imisebenzi engundoqo ibalulekileyo ekusungulweni kwezabelo, ngenxa yokuba, kunye nabo, unokubona ukuba umde kangakanani umsebenzi uye waqhubeka, emva kokuba ucacile, uhlola nganye kwibhokisi, ude uqinisekise ukuba Inkqubo igqityiwe ngokupheleleyo kwaye umsebenzi ungasuswa kwikholam yezinto ezigqityiweyo.
8. Emva kokuba ukhetho lubekwe, isabelo sishiywe ngolu hlobo lulandelayo, kwaye songezwa kwikholam ehambelana nayo.
9. Ngomzuzu umsebenzi wokutshintsha isimo, kuthathwa nje ngekhesa kwaye uhanjiswe kwisikhundla esicatshangelwayo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imisebenzi emitsha ayikwazi ukufakwa, de kube abo baqhutyelwe kwinkqubo, le ndlela yokuqinisekisa ukuba yonke imisebenzi igqityiwe, kwaye ukuba abantu ababandakanyi ngokubanzi imisebenzi engazange iyenze Ungagqiba.
10. Isixhobo esinokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo, kwiinkqubo zeebhodi, ungachaza olunye uhlobo lweempawu, ezifana nokutshintsha igama, umnini, ukuba ufuna ukugcina ingosi okanye ukuhambisa kwimibutho, cacisa imibala yebhodi nganye, umda wexesha, iiyunithi Ukuqikelela (amanqaku okanye ixesha)
11. Ukususela kwi-mobile ungayilandela imisebenzi, ngokusebenzisa isiphequluli sokhetho lwakho, akusiyo isicelo esiphezulu, esinokukhutshelwa kuso nasiphi na isitolo se-app, nangona kunjalo, ukuqinisekisa ubungqina bemisebenzi ngelixa ungenayo ikhompyutha kusondele, luncedo kakhulu.
12. Iibhodi ziboniswa, kwaye ngokucacileyo nganye yemisebenzi edalwe, ukubonisa ikholomu nganye, imane islayidi isikrini ukubonisa zonke iinkqubo kunye nenqanaba leenkqubela phambili.
Yinyathelo elikhulu kubaphathi beemashishini amancinci, amabhrijithali edijithali kunye nabo bantu bafuna ukuzinzela ngokwabo kwimisebenzi yabo (njengabafundi okanye iiprojekthi ezizimeleyo zabanye), kwaye ezi zinto zidibaniswe ngenye iiseti ezininzi .
Ukongezelela, yindlela yokuba abaphathi bamagosa bathumele imisebenzi kwiqela labo lamalungu. Kuyathakazelisa, njengesixhobo sokukhululeka esinje, kunokwenzeka ukujonga ngentshukumo yonke iminyango yentlangano, ayikhawulelwanga ngokwalo naluphi na umsebenzi, akukho nto inqatshelweyo, enika inkululeko enkulu yokusetyenziswa. Kwaye, ukuba oko kwakungekho okwaneleyo, akupheli njengoko abasebenzi babelwe imisebenzi -kuku kwenzeka nge-ajenda, iincwadi kunye nezinye izibonelelo ze-ofisi-, lelinye lelinye linokukwenza ukuba uthumele idatha yakho kule sixhobo.
Siyathemba ukuba kuye kwaba luncedo, kwaye wamema amaqela anomdla ukuba afinyelele Kanbanflowflow kusuka kwiwebhusayithi yakho, okanye kwi-browser yefowuni, iya kuba yindlela epheleleyo yokufaka umkhiqizo wexesha ledijithali ngendlela elula kwaye enobubele.
Post edlulileyo«Edlulileyo Inkcazelo - I-FME World Tour Barcelona
Post Next Ikhosi ye-AutoCAD yama-Free-onlineOkulandelayo "